MoeMaKa VDO | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးရဲ့ ဆန်ဖရန်မြန်မာမိသားစု အမေးအဖြေများ ရုပ်သံ အပိုင်း ၃ SFBC Organizers and Friends, ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၃ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့၏...
Ko Ko Gyi with SF Burmese Community VDO – part ii
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး နဲ့ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ရုပ်သံ အပိုင်း ၂ SFBC Organizers and Friends, ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၃ ကိုကိုကြီး နဲ့...
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ရုပ်သံ အပိုင်း ၁ SFBC Organizers and Friends, ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၃ Tags: ဆန်ဖရန် Related...
Suu – The Choice, YouTube with Burmese Subtitle
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်သံ – The Choice (မြန်မာစာတမ်းထိုး) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
NYC – Ko Ko Gyi & Min Ko Naing
နယူးယောက်မှာ မင်းကုိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ အဖြေပေး ယူကျုရုပ်သံကောက်နုတ်ချက်၊ မေ ၂၇၊ ၂၀၁၃ http://www.youtube.com/watch?v=j31gM9jMQpMhttp://www.youtube.com/watch?v=bKKOQrrCsgM အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ မှာ -၈၈-ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် နဲ့ကိုကိုကြီးတို့ က မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ ...
Min Ko Naing & Ko Ko Gyi in Las Vegas – Greeting
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဆရာတော်ဦးဝိသုတစာရနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း စီစဉ်တင်ဆက် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ မေ ၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဆရာတော်ဦးသုဒ္ဒရ၀ံသနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း စီစဉ်တင်ဆက် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊ (ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂) မိုးမခရုပ်သံ၊ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related...
SUU at Tokyo University – 17th April 2013
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုကျိုတက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း ရုပ်သံ ကိုထွန်းဝေ (ဂျပန်) ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related...
Interview with Saffron Monks – Ashin Nanda Wunth
SUU with Burmese Community in Japan – Video
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျိုတိုမြန်မာမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ရုပ်သံ ကိုဇေယျာ၏ ယူကျုကနေ ရယူတယ်။ ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျပန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ ဘားမားကင်ပိန်း ဂျပန်၏ ဗီဒီယို၊ ဧပြီင်္ ၁၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
88 Generation Ko Htay Kywe – Talk, Discussion, Q & A
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ရုပ်သံ (၂) SFBC ရုပ်သံရိုက်ကူးချက်၊ မိုးမခပြန်လည် တင်ဆက်၊ ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ မတ်လ ၂၉ ၊...
၈၈ မျိုးဆက် ကိုဌေးကြွယ်နှင့် ဆန်ဖရန်မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ အပိုင်း ၁ (မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၏ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းနှင့် ကိုဌေးကြွယ်ကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်း) SFBC Organizers & Friends ရုပ်သံ၊ ဧပြီ ၉...
မန္တလေးမြို့၊ ဂဠန်နီဆရာတော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ဧပြီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ (မိုးမခရုပ်သံ) Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း...